थैली वा पेवा रकमको कमाइ !::Hamro Koshi Awaj / awaz
आजको स्तम्भः विचार, फिचर, मेरो भन्नुछ
थैली वा पेवा रकमको कमाइ !
महिलाले यसरी पनि कमाउन सक्छन्
वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता २०४६ सालदेखि बामे सर्दै आएको हो । हालका दिनमा अझ महिलाहरु पुँजी बजारमा पनि सक्रिय रुपमा लाग्न थालेका छन् । पुँजी बजारमा घरायसी कामको व्यवस्थापन गरेर फुर्सदको समय उपयोग गर्न सकिन्छ । बुझेर लगानी गरे राम्रो लाभसमेत लिन सकिने हुनाले शेयर बजारमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय हुँदै गएको छ ।
यस्तो बेला धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायले देशैभर जनचेतनामूलक बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लिइएर गाउँ गाउँमा जानुपर्ने लगानीकर्ता सरोजा ढकाल बताउँछिन् । महिलाहरु बचत गरेर भविश्यमा आइपर्ने गर्जो टार्नबढी सचेत हुन्छन् । महिलाले पुँजी परिचालन गरेर राम्रो आर्थिक हैसियत बनाएका उदाहरण पनि प्रशस्त देखिएका छन । आफ्नो पैसा कसरी, कति लगानी गर्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनसके त्यसबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
शेयर कारोबार गरेरै राम्रो रकम हातमा लिएर सक्षम लगानीकर्ता भएका महिला दिदीबहिनी धेरै छन् । उनीहरु विस्तारै सेयर कारोबारका क्षेत्रमा अब्बल भएर निस्कँदैछन् । उल्लेख्य रुपमा महिला लगानीकर्ता बढ्दै जानु अत्यन्तै उत्साहजनक हो ।
बच्चालाई स्कुल पठाइएर फेरि छुट्टी भएपछि लिन जान भ्याउने कारोबारको समय ११ देखि ३ बजेसम्म हुने हुनाले महिलाले घरको काम सकेर विभिन्न ब्रोकर कम्पनीमा गएर सहजै शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय ब्रोकरको शाखा विस्तारका साथै नियामकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले आक्रमक रुपमा बजारमा सुधारको योजना ल्याएकाले महिलालाई अझै सजिलो भएको छ ।
शेयर खरिद बिक्री गर्न पूँजी चाहिन्छ । महिलालाई पनि बिनापुँजी लगानी गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण महिलालाइ पूँजीको पहुँच आवश्यक छ । बैंकहरुले पनि घरपरिवारमा प्राप्त हुने आर्थिक पहुँच तथा सेयर धितोको क्षमता हेरर ऋण प्रवाह गरेका छन् । महिलालाई पुँजीमा पहुँच बढाउन सके क्षमताअनुसारको लगानीबाट पुँजी वृद्धि गर्दैै अगाडि बढ्ने अवसर प्रशस्त आउँछ । अबका दिनमा देशका विभिन्न सहरमा ब्रोकरका विस्तार भएका शाखामार्फत् महिलाको पहुँच अझ बढाउन ब्रोकर र धितोपत्र बोर्ड आक्रमकरूपमा लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गाउँका महिलाको थैलीमा भएको पैसा वा पेवा रकमलाई बित्तीय बजारमा ल्याउने काम सेयर बजारले गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाइएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेका बेला सेयर बजारमा ल्याउन सके त्यसले उत्पादकस्वरुप लिन सक्छ । छरिएर रहेको पुँजीलाई शेयर बजारले एकै ठाउँमा जम्मा गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ ।
शेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउने माध्यम बित्तीय साक्षरता प्रमुख हो । देशैभर महिलालाई शेयरको महत्व, सम्भावना र बित्तीय पहुँच सम्बन्धी जनचेतनाको काम गर्न सके, शेयर कारोबार गरी सफल भएका महिलाको सहकार्यमा जनचेतना कार्यक्रम संचालन गरे महिलाको आर्थिक उत्थान हुनुका साथै बजार विस्तार प्रभावकारी हुने महिला लगानीकर्ता सम्झना सिलवालको धारणा छ ।
होडबाजीभन्दा संयमित भएर लगनी गर्दा शेयर बजारबाट मनग्गे आम्दानी हुने आफ्नो अनुभव रहेको लगानीकर्ता तुलसा भट्टराइले बताइन् । उनले महिलाले प्राथमिक शेयर र दोस्रो बजारमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएको अनुभव सुनाइन् ।
यसले के देखिन्छ भने शेयर बजारमा सबै खाले महिला लगानीकर्ताको उपस्थिति छ । कोही अध्ययन गरेर लगानी गर्छन् त कोहि विगतका प्रवृत्ति हेर्छन् । भनिन्छ नि कि पढेर जानिन्छ कि परेर जानिन्छ । धेरै जसो महिला लामो समयको लगानी नभई नाफा कमाउन खतरा मोल्ने गरी शेयर खरिद गर्छन् । कसैले लामो समयमा प्रतिफल लिने गरी लगानी गर्छन । अधिकांशलाई आफूले किनबेच गर्ने कम्पनीबारे खासै जानकारी हुँदैन । आफूले किनेको कम्पनी वाणिज्य बैंक हो कि बिकास बैंक, त्यसको पूँजी, नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी कति छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन । मर्जर र अक्वायर पत्तो छैन ।
यस्ता कुरा बुझेर मात्र लगानी गर्नु पर्छ । बढ्ने बेलामा त सबै कम्पनी उस्तै जस्ता लाग्छन् । बजार स्थिर भएका बेला राम्रो कम्पनीबाट मात्र प्रतिफल लिन सकिन्छ । कम्पनीको अवस्थाले बजारमा निकै प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समयमा सुध्रिँदो वित्तीय अवस्था, देशमा देखिएको सकारात्मक माहौल र देशैभरी गरिएको ब्रोकर शाखा विस्तारले सेयर बजारलाई विस्तारै माथि लैजानुका साथै महिला सहभागिता वृद्धि गर्न सघाउने छ । यसले उनीहरुको जिवनस्तर उकास्न अझ अवसर सिर्जना गर्ने छ ।